Umaki: izitayela | Martech Zone
I-Python: Script A Google Autosuggest Extract of Trends yamaNew Search Amagama wakho angukhiye
NgoMsombuluko, Mashi 29, 2021 NgoMsombuluko, Mashi 29, 2021 Osman Sirin
Wonke umuntu uyayithanda i-Google Trends, kepha kuyinkohliso uma kukhulunywa ngamagama angukhiye we-Long Tail. Sonke siyayithanda isevisi esemthethweni ye-google yokuthola ukuqonda ngokuziphatha kosesho. Kodwa-ke, kunezinto ezimbili ezivimbela abaningi ukuthi bayisebenzisele umsebenzi oqinile; Lapho udinga ukuthola amagama angukhiye amasha we-niche, akukho datha eyanele ku-Google Trends Lack ye-API esemthethweni yokwenza izicelo kumathrendi we-google: Lapho sisebenzisa amamojula afana ne-pytrends, lapho-ke kufanele
NgoMsombuluko, Disemba 7, 2020 NgoMsombuluko, Disemba 7, 2020 UJeroen Van Glabbeek
Ukuhlangenwe nakho kwamakhasimende okuthuthukisiwe sekuyinto engeke kuxoxiswane ngayo kumabhizinisi afuna ukuheha nokugcina amakhasimende. Njengoba umhlaba uqhubeka nokungena esikhaleni sedijithali, iziteshi ezintsha zokuxhumana namapulatifomu wedatha athuthukile kudale amathuba ezinhlangano zokuthuthukisa ulwazi lwamakhasimende abo nokuzivumelanisa nezindlela ezintsha zokwenza ibhizinisi. U-2020 ube unyaka ogcwele iziyaluyalu, kepha futhi kube yisikhuthazi sokuthi amabhizinisi amaningi ekugcineni aqale ukwamukela idijithali - noma
Akuyona imfihlo ukuthi ukuthambekela kokumaketha kuvela nezinguquko nobuchwepheshe obusha. Uma ufuna ibhizinisi lakho livelele, letha amakhasimende amasha futhi wandise ukubonakala ku-inthanethi, kuzodingeka ukuthi usebenze ngokushintshwa kwezobuchwepheshe. Cabanga ngamathrendi ezobuchwepheshe ngezindlela ezimbili (futhi ingqondo yakho izokwenza umehluko phakathi kwemikhankaso ephumelelayo namakhilikithi kuma-analytics akho): Thatha noma yiziphi izinyathelo zokufunda izitayela futhi uzisebenzise, ​​noma ushiye ngemuva. Kulokhu
NgoLwesine, Februwari 8, 2018 ULwesihlanu, February 9, 2018 Douglas Karr
Uma ubuza abanikazi be-ejensi yezentengiso abayishumi nambili ukuthi benzani, ukuthi bayakhula noma cha, nokuthi bazuza kanjani ngezinsizakalo abazinikezayo… Ngiyaqiniseka ukuthi uzothola izimpendulo eziyishumi nambili ezihlukile kulowo nalowo. Anginakho ukungabaza okuncane ukuthi sonke siyakuthanda esikwenzela amakhasimende ethu, kepha sonke sithola indlela esikulungele futhi siqonde leyo ndlela. I-2018 RSW / US Marketer-Agency New Year Outlook Infographic isuselwa kwinhlolovo yethu yakamuva,